China Boltless Shelving umzi-mveliso kunye nabavelisi |UKWAZISA
Uhlobo lweRacking: Iishelfu ezingenabholti
Ubunzulu:≤600mm Iyalayisha: 50-150kg / kwinqanaba
Ishelufu engenabolt, njengamagama ayo, ayifuni bholithi kuyo yonke inkqubo yeeshelufu.Inokudityaniswa ngokulula nje nge-mallet yerabha.Xa kuthelekiswa ne-bolt & nut edityanisiweyo yohlobo lweshelufa, igcina ixesha elininzi kwindibano kunye nokuqhaqha.
② Iindleko eziphantsi
Amalungu eshelufu engena bhoti alula kakhulu, njengokuthe tye, umqadi, isibiyeli esisecaleni kunye nepaneli yentsimbi, ngoko kubiza kakhulu ukonga.Ukongeza kumacandelo aphambili, kukho ezinye izesekeli zokhetho, ezinje: i-mesh yecala, i-mesh yangasemva, i-cladding esecaleni, i-back cladding, isahluli, i-portal tie kunye njl.
③ Ikhuselekile kwaye ithembekile, ulwandiso olulula
◆Iyakhiwe ngamacandelo alula, ishelufu engenabholti yiyunithi ekhuselekileyo nethembekileyo, elungelelaniswe kwizicelo ezahlukeneyo.
◆ Ngaphandle kweyunithi eqhelekileyo ye-2-post boltless shelving unit, Yazisa kwakhona ibonelela ngeyunithi ye-3-post-shelving unit, eyanelisa iimfuno zobunzulu obude, kwaye ixabiso liphantsi kakhulu kunoyilo lokubuyela emva.
I-2-post boltless shelving
I-3-post boltless shelving
④ 4-macala okufikelela
I-Boltless shelving "isakhelo" idityaniswe ngenkxaso ethe tye kunye necala, ngaphandle kwe-H ye-bracing kunye ne-D bracing, evumela ukufikelela okungathintekiyo ukusuka kumacala omane.Yenza ukugcinwa kwempahla kunye nokuchola ngokufanelekileyo nangokukhawuleza.
Ngaphambili: Engile Shelving
Okulandelayo: Iqonga lentsimbi
Qhuba kwi Racking, Asrs Ugcino, Umhambisi, I-Four Way Shuttle, ICarton Live, IShuttle yomntwana,